Posted by Tranquillus | Aogositra 15, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Mametra-pialana tsy misy filazana mandritra ny fitondrana vohoka. Mety ve izany ?
Raha ny tokony ho izy, mpiasa iray izay mandray ny fety mba hanafoanana tsy misy fepetra ny fifaneken'ny asa. Tsy maintsy manaja ny vanim-potoana ara-dalàna. Izany dia ahafahan'ny mpampiasa azy mikarakara ny fanoloana azy. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fe-potoana iray volana dia omena ho an'ny tsy mpitantana. Ho an'ny mpanatanteraka, matetika dia maharitra telo volana ny fotoana.
Vao avy nianatra momba ilay hetsika sambatra ianao. Ianao dia tapa-kevitra mafy ny hanova boaty. Ny fandaminana tsy takarina, takalona tsy voaloa, fialantsasatra fialana. Toe-javatra mampalahelo izay misy fiantraikany aminao amin'ny fitondran-tena.
Andininy L1225-34 ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny asa dia mamaritra fa ny mpiasa iray ao anatin'ny toe-javatra bevohoka dia voamarina ara-pitsaboana. Manan-jo hametra-pialana tsy misy fampandrenesana. Fialana am-panaovana fiantraikany eo no ho eo. Raha manao safidy ianao. Tsy hanana valim-pananana ho an'ny famarana ny fifaneken'ny asa handoavana ny mpampiasa anao ianao.
Na izany aza, fantaro fa fodiana tsy misy fiverenana io. Amin'ny tranga tsy misy azo atao raha tsy izany. Vonona ny haka ny toeranao ianao. Fa manoloana izany, miandrasa mandra-pialanao. Io dia ahafahanao manana ny laharam-pahamehana mandritra ny 12 volana amin'ny famerenam-bola. Azonao atao ihany ny mandray soa avy amin'io fitaovana io raha miala amin'ny vohoka ianao. Anjaranao ny mandanja ny fahasahiranana sy ny cons.
Taratasy kely hialana tsy hitadihana mandritra ny fitondrana vohoka.
Tsy misy na inona na inona ao amin'ny lalàna mandrara anao, rehefa manana mari-pahaizana momba ny fitsaboana izay manaporofo izany. Raha hampiasa fomba manokana hialana rehefa bevohoka ianao. Azonao atao ny mifaly amin'ny antso an-tariby fotsiny. Fa mba hialana amin'ny fifandirana. Manoro hevitra anao aho hampiasa taratasy miaraka amin'ny fanekena ny fandraisana. Hahazo tombony amin'ny fandefasana ity mail ity ianao. Mangataka ny fandoavana ny fifandanjanao amin'ny kaonty rehetra, ary koa ny fanamarinana momba ny asa miaraka amin'ny taratasy fanamarinana Pôle Emploi. Azo inoana fa tsy mankasitraka ny làlanao ianao ary manangavy anao ho tonga haka azy ireo izahay. Tsy voatery handefa azy ireo aminao ny mpampiasa anao.
HAMAKY Taratasy santionany hitakiana fandoavana premium
Taratasy santionany isa 1
Atoa Voalohany no anarany
Lohahevitra: Taratasy fametraham-pialana tsy misy vanim-potoana fampandrenesana
Manenina aho ny hampahafantatra anao amin'ity fanapahan-kevitra noraisiko ity.
Azafady azafady fa mandaitra avy hatrany ny fialako. Eny tokoa, satria ny fahitana ny maha-bevohoka ahy dia voaporofo tamin'ny taratasy fanamarinana ara-pahasalamana izay andefasako anao amin'ity taratasy ity. Ary mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny andininy L1225-34 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa.
Tiako ny manararaotra ny fotoana natolotra ahy hamela ny toerako tsy misy hatak'andro. Ary tsy mila mandoa onitra ho fanafoanana ny fifanekena asa aho.
Koa manasa anao aho handefa haingana ny antontan-taratasy ilaiko. Ny fahazoako mandanjalanja ho an'ny kaonty, taratasy fanamarinana asa ary koa taratasy fanamarinana Pôle Emploi.
Miaraha mankasitraka, ry Madama, ny fanehoan'ny fiheverako avo indrindra.
Taratasy santionany isa 2
Lohahevitra: Taratasy fametraham-pialana tsy misy fe-potoana fampandrenesana
Amin'ny alahelo no ilazako ny fanapahan-kevitro hametra-pialana tsy misy fampandrenesana. Rehefa afaka 15 taona tao amin'ny vondrona misy anay. Fotoana iray amin'ny fiainako izay hamela ahy fahatsiarovana tsara.
Na eo aza ny zava-drehetra dia vao avy nianatra aho ary mieritreritra fa bevohoka aho. Nataoko ny nametraka dokotera ara-pitsaboana momba ny fitondrana vohoka. Antontan-taratasy izay hahitako anao mipetaka.
Araka ny fantatrareo dia tsy voatery hanaja ny vanim-potoana aho. Ny toe-javatra niainako dia mamela ahy handao ny sezako avy hatrany.
Izany dia hahafahako manokana ny tenako ho amin'ny fanitsiana maro eo amin'ny fiainako manokana.
Misaotra mialoha mialoha handefa ahy haingana araka izay azo atao. Ny antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'ny famaranana ny fifaneken'ny asako.
Maniry anao andro tsara indrindra, azafady manaiky ry Sir, ny fanehoana ny fiheverako feno fanajana.
Sintomy ny "Taratasy fametraham-pialana tsy misy fampandrenesana vanim-potoana 1"	taratasy fametraham-pialana tsy misy fe-potoana-fampandrenesana-1.docx – Nalaina in-437 – 13 Kio
Sintomy ny "Taratasy fametraham-pialana tsy misy fampandrenesana vanim-potoana 2"	taratasy fametraham-pialana tsy misy fe-potoana-fampandrenesana-2.docx – Nalaina in-449 – 13 Kio
Mialà tsy misy fanamarihana, zo ho an'ny vehivavy bevohoka 13 Febroary 2022Tranquillus
Teo alohaLazao ny fialanao amin'ny fialan-tsasatry ny mpampiasa anao
manarakaMianara mijery ny tsipika payslip anao andalana